Aiza no ahazoana môdely WordPress maimaim-poana? | Famoronana an-tserasera
Mary Rose | | Wordpress
Mivoatra isan'andro ny fampivoarana tranonkala, toy ny famolavolana template WordPress. Raha eto ianao dia satria mitady template WordPress maimaim-poana ianao. Ary tsia, ny hoe maimaim-poana ny môdely iray dia tsy midika fa ratsy noho ny karama. Ny iray amin'ireo tombony voalohany dia ny fitahirizana amin'ny fampiasam-bola voalohany.
Noho izany, nanao lisitry ny tranokala 5 ahafahanao misintona ny lohahevitra WordPress maimaim-poana tsara indrindra.
1 Free templates WordPress
1.4 Lohahevitra maoderina
WordPress dia a rindrambaiko open source, navoaka tamin'ny 2003, miaraka amin'ny tanjona amin'ny famoronana karazana tranonkala rehetra. Ao anatin'izany dia hahita lahatahiry ofisialin'ny lohahevitra WordPress ianao. Amin'ny alàlan'ny fampiasana an'ity pejy web ity hisintonana ireo môdely dia azonao atao ny mametraka azy mivantana avy amin'ny fitantanana. Noho izany dia tsy mila misintona ny installer ianao. Havaozina tsy tapaka ny lohahevitra WordPress.org. automática, ny logiciel mihitsy no handefa fampahafantarana anao momba ny fanavaozana misy.
ny ankamaroan'ny môdely manana vinavina izy ireo mba hahitanao ny endriky ny tranokala manontolo ary hivezivezy amin'izany. Ho fanampin'izany, ao amin'ny môdely tsirairay dia hahita fanazavana fohy momba ilay lohahevitra sy ny toetrany ianao. Toy ny dikan-teny, ny fanavaozana farany azy, ny fametrahana mavitrika, ny WordPress version ary ny PHP version.
JustFreeWpThemes dia orinasa iraisam-pirenena manolotra vokatra sy serivisy mifandraika amin'ny famolavolana sy ny fampandrosoana ny tranokala. Miaraka amin'ny specialization amin'ny Joomla sy WordPress CMS. Nanangana ity tetikasa ity izy ireo mba hanatsarana ny lahatahiry lohahevitra WordPress, miaraka amin'ny fikarohana tsara kokoa, rohy demo tena izy, changelogs, docs, fanohanana, sns.
koa, manome lisitry ny lohahevitra WordPress maimaim-poana tsara indrindra nodinihan'ny ekipan'ny manampahaizana, manome URL demo feno sy rakitra DOC mivantana ary fanohanana izy ireo.
Izany dia tranomboky template izay manolotra safidy lohahevitra WordPress marobe. Izy io dia noforonina tamin'ny taona 2008, miaraka amin'ny tanjona ho sehatra lohahevitra an-tserasera ho an'ireo mpampiasa mila mamorona ny tetikasany na mamolavola azy. Tsy hahita lohahevitra maimaim-poana maro ianao amin'ity tranokala ity, saingy tokony hotadidinao fa miovaova ny lohahevitra maimaim-poana atolony, ka hahita vaovao ianao isam-bolana. Izy ireo dia lohahevitra WordPress premium izay azonao alaina maimaim-poana. Ho afaka miditra amin'ny sasany amin'ireo lohahevitra WordPress tsara indrindra eran'izao tontolo izao ianao.
Ity sehatra an-tserasera ity dia tena tsotra sy azo ampiasaina, satria Manana sivana maromaro izy io hanaovana fikarohana mifototra amin'ny zavatra tadiavinao.
Ity orinasa ity, rehefa niasa nandritra ny taona maro niaraka tamin'ny lohahevitra WordPress, dia nanangona ireo hevitra miasa sy ireo izay tsy miasa. Noho izany dia nanapa-kevitra ny hamorona lohahevitra miaraka amin'ny endrika manintona sy mora ampiasaina izy ireo. Miloka amin'ny fahatsorana. Modern Themes dia naorina ka mpampiasa Mpanamboatra WordPress amin'ny ambaratonga fahaiza-manao rehetra afaka miaina traikefa feno amin'ny tranokala maoderina toa ity izy ireo.
Amin'ny alàlan'ny fandrafetana lohahevitra manana safidy tsotra azo ovaina, dia manome toerana fanombohana mora kokoa sy mora ampiasaina ny mpampiasa. Nahenany ny safidy mahazatra ho amin'ny asa ilaina. Ny lohaheviny rehetra dia mora amboarina ary azo atambatra amin'ny plugin WordPress rehetra. Hahita lohahevitra misy endrika tsotra sy minimalista ianao. Afaka misafidy amin'ny loko sy endritsoratra marobe avy amin'ny Google Fonts ianao.
TemplateMonster dia a tsena an-tserasera izay ahafahanao mividy izay rehetra ilainao hamoronana tranokala. Betsaka ny mpamorona tsy miankina mivarotra ny vokatra ao amin'ity tsena ity mba ahafahan'ny mpampiasa hafa mamorona tranokalany manokana.
Ny endrika amin'ity tranokala ity dia novolavolaina manokana ho an'ny WordPress. Ireo môdely ireo dia azo amboarina ary hanampy anao hamorona na hanavao ny endriky ny pejin-tranonkala efa misy. Manana fitambarana lohahevitra WordPress maimaim-poana ho an'ny tanjona samihafa izy ireo. Azonao atao ny misafidy ny endrika tianao indrindra ary haharitra minitra vitsivitsy ny fampidinana azy.
Mba hanaovana izany, araka ny hazavaina ao amin'ny tranokalany, dia tsy maintsy mizara ny pejy môdely amin'ny tambajotra sosialy ianao. Ny zavatra iray tokony hotadidinao dia izany ireo maodely ireo dia natao ho an'ny fanabeazana, ka ny fanohanana sy ny fanavaozana dia tsy misy afa-tsy amin'ny lohahevitra Premium. Momba ny toetran'ireo môdely ireo dia azontsika lazaina ireto manaraka ireto:
Endrika mamaly: ny vohikala nofidinao dia hifanaraka amin'ny famahana ny efijery amin'ny fitaovana finday rehetra.
Web Browser mifanentana: tsy mila manahy momba ny fampisehoana ny tranokalanao amin'ny navigateur hafa ianao. Ny fanovana ataonao dia hifanaraka foana amin'ny endriny sy ny fampisehoana amin'ny navigateur rehetra.
Safidy lohahevitra maro: azonao atao ny manova ny endriky ny lohahevitra nofidinao ary koa mampifanaraka ny typography, logo na navigation.
Ity misy rohy mankany amin'ny lahatsoratra hafa hahitanao bebe kokoa Modely WordPress, fa tamin'ity indray mitoraka ity, nandoa vola. Angamba tsy voatery ho lafo be ny môdely tadiavinao. Misy karazany maro ny vidiny, ary azo antoka fa mifanaraka amin'ny teti-bolanao ny iray.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Famolavolana tranonkala » Wordpress » Free Templates WordPress
Tantaran'ny logo Pepsi
5 amin'ireo fanentanana dokambarotra tsara indrindra